2020. Gaga sy talanjona ny olona teo Ambohimena, tanàna eo am-pivoahana an’Antsirabe manaraka ny lalam-pirenena faha-7 nahita « ambulance » sy fiara 4x4 anankiroa an’ny Polisy, tonga naka olona miisa fito, ary nitondra azy ireo avy hatrany nahiboka ao amin’ny Hopitaly Atsimo. Fianakaviana iray mpiasa ao Ambatovy, vao tonga avy any Toamasina, nandeha kamiao, ny efa-mianaka amin’izy fito ireo, mpampiantrano nivantanan’izy ireo kosa ny telo mianaka. Mandeha ihany koa etsy andaniny ny fanadihadiana hamantarna ireo olona efa nifanerasera tamin’izy ireo, nandritra ny fotoana nahatongavany tao Ambohimena. Efa hitan’ny olona nivezivezy ary nividy entana tamin’ny tsenakely manodidina ireto olona avy any Toamasina ireto. Niampy olona 4, mpiray tanàna ireo nahiboka ao amin'ny Hopitaly Atsimo hatreto. Mazava ho azy fa ahiahiana coronavirus no anton’izany satria isan’ny nahitana tranga miisa 7 tany Ambatovy ny faran’ny herinandro teo, ary tsy afa-mivoaka intsony ny mpiasa ao amin’ity orinasa goavana ity, fa mitoka-monina tanteraka.
Mijanona ho 151 ny isan'ny voan'ny Coronavirus eto Madagasikara satria tsy nisy ny tranga vaovao omaly.Niampy 2 kosa ny sitrana, izany hoe olona 101 hatreto no naharesy ny Coronavirus, ary 50 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hopitaly.